Fahasalamana - Bezzia | Bezzia
La fahasalamana Azo antoka fa io no sehatra manandanja indrindra amin'ny fiainana ary amin'ny ankapobeny dia ampifandraisina amin'ny hafa toy ny soa, fifandanjana na ny tsy fisian'ny aretina. Araka izany, hoy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, dia manondro azy io ho toy ny faran'ny feno fahasambarana ara-batana, ara-tsaina sy ara-tsosialy.
Ao Bezzia izahay dia manokana fizarana ho an'ity lohahevitra ity ary ao anatin'izany dia miresaka lohahevitra toy ny aretina, torohevitra mba ho salama na hihena. Amin'ireto lohahevitra ireto dia te hanolotra vaovao izahay mba hahafantaran'ny olona ny maha-zava-dehibe ny fikolokoloana ny tenany, ny fihinanana sakafo tsara na ny fampihetseham-batana, fa koa hamafisina ny maha-zava-dehibe ny fampiharana ireo torohevitra ireo.
Manantena izahay fa eto dia hahita aingam-panahy hikarakara ny fahasalamanao.
Ahoana no hiatrehana ny dermatitis atopika amin'ny fahatongavan'ny fararano
ny Toñy Torres hace Ora 17 .
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny fararano ihany koa ny olana ara-potoana toy ny dermatitis atopika. Olana amin'ny hoditra izay misy ...
Ny lalan-drantsika amin'ny tongotra, toro-hevitra 5 hisorohana azy ireo
ny Toñy Torres hace Andro 2 .
Ny lalan-drantsika na lalan-drantsika dia lalan-drà lasa mihalehibe, mihalehibe ary mivadika ao ambanin'ny hoditra. Ny lalan-drà amin'ny ...
ny Susana godoy hace Andro 2 .
Ka dia tsy miteny ianao hoe tsy afaka miofana ao an-trano raha tsy manana fitaovana! Satria tsy maintsy manipy azy foana ianao ...
Teknika 4 hampitomboana ny fahatokisan-tena
ny Toñy Torres hace Andro 3 .
Ny fitiavana tena dia tokony ho fitiavan'olona voalohany foana. Ny fitiavanao tena no zava-dehibe, ...
Fanazaran-tena mba handrindrana ny vatana manontolo ao an-trano
ny Toñy Torres hace Andro 5 .
Ny fiovan'ny fomba fiainana, ny olona mifanaraka amin'ny fepetra vaovao ary mitady fomba hafa hanohizana ny fiainana ...
ny Susana godoy hace Andro 5 .
Ny hoe mahia dia tsy mitovy amin'ny fahasalamana
ny Toñy Torres hace Andro 6 .
Ny fahamendrehana dia matetika mifandray amin'ny fahasalamana ary diso tanteraka izany ary mety hiteraka fahamatorana ...
Inona no atao hoe aretina mialoha ny fiterahana?
ny Toñy Torres hace 1 herinandro .
Ny aretina Premenstrual syndrome dia manondro soritr'aretina marobe mifandraika amin'ny vanim-potoana. Toetra sy toetra mahazatra ...
Superfoods izay tokony ampidirinao ao anaty sakafo
Raha resaka sakafo sy sakafo dia tsy azonao atao mihitsy ny milaza fa voasoratra daholo ny zava-drehetra. Satria, soa ihany, isan'andro no misy ...
Fanatanjahan-tena ary mihinjitra ho an'ny hatoka
ny Susana godoy hace 1 herinandro .
Androany mihoatra ny fampiofanana fotsiny dia hoentina amin'ny fampihetseham-batana maromaro isika na hatrany amin'ny ...
Ahoana ny fomba hilatsahanao fotoana fohy kokoa
Pilina fanabeazana aizana: tombony sy fatiantoka
Ahoana ny famongorana ny aretin-nify mampijaly?
Ny fampiasana ny Vicks Vaporub
Pilina fanabeazana aizana
Magnesium carbonate fahagagana ho an'ny vatanao
Ahoana ny fomba hanatsarana fanorana tsara tsikelikely
Fanazaran-tena tsotra hampihenana ny hatoka
Sequelae an'ny Bulimia sy Anorexia
Inona no atao hoe fanafihana mikorontana?